(miaraka amin’ny sekoly Fjkm Rasalama – kilasy taona Fahadimy (7ème)
Atolotra antsika anio ny valin’ny laza adina Géographie.
b) Deux îles voisins de Madagascar:
2.La distance entre Madagascar et l’Afrique:
Sud (1) (1) brousse épineuse
Centre (2) (2) savane
(hafatra ho an’ny paoiste: asiana flèche mi-relié reo eo ambony eo reo d esorina le chiffre aveo)
4.Les différentes phases d’un cyclone:
a) avis d’avertissement
b) avis de menace
c) avis d’alerte
5. Le plus long fleuve de Madagascar est Mangoky.
6. L’exode rurale:
C’est le déplacement définitif des habitants de la campagne vers la ville
7. Les vents dominants qui souffent à Madagascar:
b) Le Mousson
8. Deux barrages hydroéléctriques à Madagascar:
10.La carte de Madagascar avec:
- le plus grand lac de Madagascar: Alaotra
- et le massif d’Ankaratra
(miaraka amin’ny Ceg Antanimena – kilasy Taona fahasivy (3ème)
Torolalana mahakasika ny taranja Mathématiques indray no atolotra antsika anio.
Taranja heverina ho mifandraika amin’ny fiainana hafa kanefa tena ampiharina amin’ny andavanandro ny taranja Mathématiques. Raha te ho injeniera, na te ho havanana amin’ny famoriana fiaramanidina, ohatra, ny mpianatra iray dia mila mahafehy ny «trigonométrie».
Raiki-pohy, drafi-tsary… Ankoatra ny tarehimarika ihany koa dia manamarika ity taranja ity ny fampiasana ireo raiki-pohy isan-karazany na «formule» ary ireo drafi-tsary ao anatiny. Mila tadidiana avokoa ireny. Raiketina any anaty fisy mihitsy aza no tena mety hanamorana ny famerimberenana sy ny fitadidiana azy. Tokony ho hita ao anatin’io fisy io ny paik’ady amin’ny kajy sy ireo karazana drafi-tsary.
Ny olana eo amin’ireo mpianatra anefa, noho ny fieverena fa fiainana hafa ny taranja Mathématiques, dia tsy dia mianatra azy firy ary tsy miraharaha ny taranja mihitsy aza ireo mpianatra sasany.
Toe-tsaina tia karokaroka
«Mila toe-tsaina tia karokaroka, noho izany, ny taranja Mathématiques. Izay toe-tsaina izay no tokony hovolena. Ary izay indrindra ny tanjona amin’ity taranja ity na dia amin’ny fiainana andavanandro aza. Rehefa misy olana na ahoana na ahoana endriny dia misy hatrany ny vahaolana. Tsy tokony hipetra-potsiny fa mila miasa saina, mahay mikaroka ny vahaolana», hoy Rabenoavy Elie Richard, mpampianatra Mathématiques. Efa nisy mpianany tamin’ny taona 2005, isan’ireo mpanamory fiaramanidina mpiady mahay indrindra sy ikoizana ao Frantsa amin’izao fotoana izao.
Mizara telo raha fehezina ny fanadinana amin’ny taranja Mathématiques dia ny Géométrie ahitana ireo drafi-tsary, ny Algèbre ary ny Statistiques.
Toro anatra, Mpanoratra Rijakely, 10.05.2012, 09:06	FIARAHAMONINA